२० वर्षअघिका ओली : 'केपीले गल्ती पनि गर्दैन र माफी पनि माग्दैन'(अन्तवार्ता)
‘म हात्तीभन्दा पनि ठूलो शक्ति हुँ’
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रखर र स्पष्ट वक्कताका रुपमा चिनिन्छन् । दृढ र हक्की स्वभावका ओली यतिबेला देश हाकिरहेका छन् । राजनीतिमा जेल नेल भोगेर र्आका प्रधानमनत्री ओलीको विगत कस्तो थियो कसरी प्रस्तुत हुन्थ्ये । २० वर्षअघि केपी शर्मा ओलीलाई घटना र विचारले लिएको अन्र्तवार्ता साभार गरेका छौं ।
तपाईंमाथि झापामा आक्रमण भएको घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?
झापाको २ र ६ मा चुनाव जित्न नसक्ने भएर मालेले यस्तो गरेको हो त ?
एमालेले कसरी प्रतिरोध गर्छ त अब, माले त एमालेलाई सिध्याउन अघि बढिसकेको नैं देखिन्छ ?
त्यसोभए के एमालेले चाहेको छैन मालेलाई ठेगान लगाउन ?
माओवादी हत्यामा उत्रेको छ भने माले तोडफोडमा, यी दुईबीच समानता देख्नुहुन्छ ? यी दई एकै हुन् कि ?
तपाईंमाथिको आक्रमण सुनियोजित होला कि आकस्मिक ?
तपाईंले माफी मागेको कुराले मंगलबारका पत्रपत्रिकाहरूमा ठाउँ पाएको छ । कोसँग किन माफी माग्नुपरेको हो नि ?
कस्तो जवाफ ? किन नदिएको त ?
आफ्नो कमजोरी भएकैले झापामा केपी ओलीले मालेसँग झुकेर माफी माग्न थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ त ?
– म झापामा कमजोर ? कस्तो हास्यास्पद कुरा , मैले ल्याएको भोटको एक चौथाइ भाग मात्र मालेले झापामा पुऱ्याओस् । म यति मात्र भन्न चाहन्छु ।
तपाईंका विरुद्ध झापामा काङ्ग्रेस, राप्रपा, माले तीनै पार्टी एकजुट भए, अब कसरी ‘फेस’ गर्दै हुनुहुन्छ त ?
– स्यालहरू जतिसुकै सङ्ख्यामा एकत्रित भए पनि हात्तीको शिकार त गर्न सक्दैन नि ,
मतलब, तपाईं झापाको लागि हात्तीसमान हुनुहुन्छ ?
मालेलाई पराजित गर्ने रणनीति कसरी अघि बढ्छ नि तपाईंहरूको ?
कांग्रेसको स्थिति के छ नि झापामा ?
भनेपछि, एमालेबाहेक अरुको हैसियतै छैन त झापामा ?
अरू केही भन्नु छ ?
– संचारमाध्यममा आधारहीन कराहरूले पनि ठाउँ पाउने गरेका छन्, त्यस्तो नहोस् कतै पनि भन्न चाहन्छु । माफीका कुरा कपोलकल्पित हुन् । केपीले गल्ती पनि गर्दैन र माफी पनि माग्दैन । घटना र विचार साप्ताहिक, २०५५ चैत २४ बुधबार प्रकाशित